Ny sidina mivantana avy any Nur-Sultan mankany London Heathrow dia miverina amin'ny Air Astana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina mivantana avy any Nur-Sultan mankany London Heathrow dia miverina amin'ny Air Astana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Kazakhstan • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Ny sidina dia hiasan'ny fiaramanidina Airbus A321LR farany, miaraka amin'ny ora fiandrasana 7 ora sy 15 minitra mankany Londres ary 6 ora sy 30 minitra amin'ny fiverenana any Nur-Sultan.
Air Astana dia manohy ny sidina avy any Kazakhstan mankany UK.
Air Astana dia miasa Airbus A321LR amin'ny làlan'i Londres.
Ny làlan'i Londres dia hiasa amin'ny Sabotsy sy Alarobia.
Air Astana dia manohy sidina mivantana avy any Nur-Sultan renivohitra Kazakhstan mankany London Heathrow amin'ny 18 septambra 2021, miaraka amina fatra matetika isaky ny herinandro ny asabotsy sy alarobia.
Ireo mpandeha mandeha any Kazakhstan dia takiana mba hanolotra fanandramana ratsy COVID-19 natao 72 ora mialoha ny nidirany tao amin'ny firenena.
Ny seranam-piaramanidina Nursultan Nazarbayev International dia seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao amin'ny Faritra Akmola, Kazakhstan. Io no seranam-piaramanidina iraisampirenena voalohany manompo an'i Nur-Sultan, renivohitra Kazakhstan.
Seranam-piaramanidina Heathrow, antsoina hoe seranam-piaramanidina London hatramin'ny 1966 ary fantatra ankehitriny amin'ny London Heathrow, dia seranam-piaramanidina iraisam-pirenena lehibe any London, England. Iray amin'ireo seranam-piaramanidina iraisampirenena enina manompo ny faritra London. Ny seranam-piaramanidina dia manana sy mitantana an'i Heathrow Airport Holdings.